Tatitry ny OMH: mihena hatrany ny varotra solika fandrehitra | NewsMada
Mbola mitana ny sain’ny maro ny vidin-tsolika nahena nanomboka ny 20 jona teo, taorian’ny fifampidinihana teo amin’ny filoha Rajoelina sy ireo mpandraharaha amin’ny solika. Ny vidin-tsolika fandrehitra no tena nihena, 500 Ar. Ny azo ambara, araka ny tatitry ny OMH.
Ho fitsinjovana ny maro mampiasa solika fandrehitra, indrindra fa ny ambanivohitra. Izay ny antony lehibe naroson’ny fitondram-panjakana, niadiana varotra tamin’ireo mpandraharaha ka nahatonga ny vidiny ho 2 130 Ar ny litatra raha 2 630 Ar izany teo aloha. Nihena 500 Ar be izao, tombony lehibe izany ho an’ireo mpampiasa solika fandrehitra, ary milaza ny sasany fa tsy ny sitrapon’ny mponina an-tanàn-dehibe ihany no arahina. Efa nahena 100 Ar ny lasantsy ary 150 Ar ny gazoala.
Raha iverenana ny momba ny solika fandrehitra, tokantrano maro, indrindra ny any ambanivohitra, ny mampiasa solika fandrehitra manazava amin’ny alina ; fa mampiasa izany akora izany koa ny orinasa sasany. Araka ny tatitra navoakan’ny OMH (Office malgache des hydrocarbures), ny taona 2013, nihena 36 % avy hatrany ny varotra solika fandrehitra raha ampitahana ny taona 2012. Tsy mitsahatra mihena intsony ny fanjifana azy io nanomboka teo hatramin’ny 2018, ary mitohy hatramin’izao.
Antony lehibe nampihena betsaka izany fanjifana izany noho ny fahitana angovo azo havaozina any ambanivohitra. Raha 6 % ny nahazo herinaratra tany ambanivohitra, ny taona 2005, tafakatra 11 % izany izao, noho ny fiparitahan’ny angovo azo havaozina izay. Tanjona kendren’ny Ader (Agence de développement de l’électrification rurale) ny hampitombo izany hatrany. Maro ihany koa ny tantsaha mahatsapa ny fiantraikan’ny solika fandrehitra amin’ny fahasalamana, manimba ny taovam-pisefoana.
Tena be mpampiasa ny gazoala
Ny gazoala no tena be mpampiasa anisan’ny iankinan’ny fiainam-bahoaka sy ny fampandrosoana ny toekarena. Mampiasa io akora io, ohatra, ny fitaterana, ny orinasa, ny famokarana angovo, ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ny asa vaventy. Ny taona 2018, gazoala 607 821 m3, raha 27 895 m3 monja ny solika fandrehitra tamin’iny taona iny ihany. Tsy any amin’ny solika fandrehitra mihitsy ny tombontsoan’ny maro anisa, na ireo toby fivarotan-tsolika aza, vitsy sisa ny mivarotra azy io.